Gịnị bụ mmetụta ọjọọ ahụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Gịnị bụ mmetụta ọjọọ ahụ?
E nwere ọtụtụ ihe ịtụnanya dị na ihu igwe na-akọwa ọtụtụ ihe anyị amatabeghị taa. Otu n’ime ihe ndị ahụ anyị na-amaghị maka etu o si arụ ọrụ bụ ọnọdụ ndị ahụ ikuku nọ na-ekpo ọkụ karịa ka o kwesịrị mgbe ikuku ikuku dị n’ebe ọdịda anyanwụ dị.
Nke a bụ n'ihi mmetụta foehn. Ọ bụ ihe omume nke na - eme mgbe oke mmanye nke ikuku na - ekpo ọkụ na - amanye ịrịgo ugwu. Mgbe ikuku na-esi na ya rịdata, ọ na-eme ya na obere iru mmiri na okpomọkụ dị elu karị. Chọrọ ịma ihe niile gbasara mmetụta fọọlụ?
1 Kedụ ka mmetụta fọọlụ si arụ?
2 Ihe ojoo n’abia n’uwa
2.1 Foehn mmetụta n'ebe ugwu nke Alps
2.2 North American foehn utịp
2.3 Foehn utịp ke Andes
2.4 Foehn mmetụta na Spain
3 Ihe ojoo na oru ugbo
Kedụ ka mmetụta fọọlụ si arụ?
Na Spain, mgbe ifufe ọdịda anyanwụ si n’Oké Osimiri Atlantik fụọ, ikuku ikuku gafere ọtụtụ ugwu. Mgbe ikuku zutere ugwu, ọ na-arịkarị ịrịfe ihe mgbochi ahụ. Ka ikuku na-abawanye elu, ọ na-efunahụ okpomọkụ, ebe ọ bụ na gradient gburugburu ebe obibi na-akpata na ka elu ahụ na-abawanye, ọnọdụ okpomọkụ na-ebelata. Ya rute n’elu elu ugwu ahụ, ọ na-amalite ịrịda. Ka ikuku ikuku na-agbadata site na ugwu, o na-efunahụ iru mmiri ma na-eme ka okpomoku ya di elu, n'uzo di otua, mgbe o ruru n'elu, okpomọkụ ya dị elu karịa nke ọ malitere iji rịgoro ugwu ahụ.
A na-akpọ nke a mmetụta foehn ọ na-eme ebe a na Spen mgbe ifufe ọdịda anyanwụ na-efe, n'agbanyeghị na ọ bụ njirimara nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ugwu niile. Mgbe igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-arịgo ugwu ahụ, ọ na-agbasawanye, ebe ọ bụ na nrụgide ahụ na-ebelata na ịdị elu. Nke a na - eme ka ihe jụrụ oyi wee bụrụ ihe na - aga n'ihu na - aga n'ihu, nke na - eduga n'ịhapụ ọkụ latent. Ihe si na ya pụta bụ na ikuku na-ebili na-eme ka e nwee igwe ojii na ọdịda. Existencedị adị nke igwe ojii na-adịgide adịgide (n'elu) bụ ihe atụ.
A na - ejikọkarị mmetụta foehn na mmegharị cyclonic ma na - eme naanị mgbe ikuku ikuku siri ike nke na ọ nwere ike ịmanye ikuku gafere kpamkpam site na ugwu na obere oge.
Ihe ojoo n’abia n’uwa
Dịka e kwuru na mbụ, mmetụta foehn pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ ugwu niile nke ụwa, ọ bụ ezie na ọ na-emetụta mpaghara. Nsonaazụ foehn na-emekwa na ndagwurugwu. Ihe si na ya pụta na ndagwurugwu bụ na ọ na-agbagha nkasi obi ọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị na ala ndagwurugwu na-adịkarị adọrọ adọrọ. Oge ụfọdụ ndị a dabere na nghazi, omimi, morphology (ma ọ bụrụ na ọ bụ ndagwurugwu nke mmalite ma ọ bụ nke sitere n'aka glacial), wdg. Na mgbakwunye na ihe ndị a na-eme ka ọnọdụ ihu igwe kwụsie ike, ebe ọ bụ na ha nwere ike ime ka ntụgharị ihu igwe na-emebi usoro omume ikuku nke ikuku.
Yabụ anyị nwere ike ikwu na mmetụta foehn o nwere ike ịgbanwe n'ime nanị awa ole na ole ole iru mmiri nke ndagwurugwu nwere. Anyị ga-aga n’ihu ịhụ ihe nsonaazụ ọjọọ ndị a na-enwe n’akụkụ dị iche iche nke ụwa.
Foehn mmetụta n'ebe ugwu nke Alps
Ozizi nke mmetụta foehn na-agwa anyị na mgbe ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ na-efe na ọ na-ezute ugwu ugwu, iji gafere ya, a ga-amanye ya ịrịgo. Mgbe nke a mere, alụlụ mmiri nke ikuku na-ebu na-ajụ oyi ma kpuchie, na-eme mmiri ozuzo n'akụkụ ugwu. Nke a na - ebelata iru mmiri niile dị na ikuku, ya mere, gbadaa, mgbe ikuku gbadara, ọ na-aghọ ntụ ọka na-ekpo ọkụ nke nwere ntakịrị mmiri.
Kaosinadị, echiche a abaghị uru mgbe anyị na-anwa ịkọwa mmetụta foehn na Alps. Mgbe ọ na-apụta na usoro ugwu ugwu, enwere mmụba na ọnọdụ okpomọkụ, ma mmiri ozuzo esoghị ya na ndịda ya. Olee otú nke a pụrụ isi mee? Nkọwa maka ihe ịtụnanya a bụ n’eziokwu na ifufe na-ekpo ọkụ nke na-erute ndagwurugwu ndị dị n’ebe ugwu Alps esiteghị na mgbago ndịda, kama ọ bụ site n’ebe ndị dị elu. N'okwu ndị a, n'oge nrịgo ya, ikuku ikuku oyi na-eru ala nke nkwụsi ike nke na-egbochi ya iru isi nke ihe mgbochi ahụ. Naanị site na olulu miri emi ka ụfọdụ ikuku oyi a na-egbochi ịga n'ebe ugwu n'ụdị mmetụta foehn.
N'ihi iru mmiri dị ala na mgbago ugwu Alps, mmetụta a foehn na-etolite igwe dị egwu, na-emekwa ka usoro ịgbara ọkụ na-enwe nnukwu okpomọkụ. Nsonaazụ foehn nwere ike ibụ oke esemokwu dị iche iche dị na ogo 25 ruo ụbọchị oyi.
North American foehn utịp
Mgbe mmetụta foehn pụtara na ọdịda anyanwụ North America a na-akpọ ya Chinook. Mmetụta a bụ isi na mbara ala ma ọ bụ ọwụwa anyanwụ nke Ugwu Rocky na United States na Canada. Mgbe ọ mere na nke ikpeazụ, ikuku na-efekarị na mpaghara ọdịda anyanwụ ọ bụ ezie na enwere ike gbanwee ya site na ọdịdị ala. Mgbe mgbe, Chinook na-amalite ịfụ n’elu mgbe ihu Arctic na-alaghachi n’ebe ọwụwa anyanwụ, oke osimiri gbanwere agbanwe si na Pacific abanye, na-emepụta mmụba dị egwu na ọnọdụ okpomọkụ. Dika onye iro ozo ozo, ikuku Chinook ha dị ọkụ ma kpọọ nkụ, na-adịkarị ike ma na-egbu egbu.
Nsonaazụ nke Chinook bụ iji belata oge oyi, mana nke kachasị ike ga-agbazekwa centimita 30 nke snow n'ime awa ole na ole.
Foehn utịp ke Andes
Na Andes (Argentina) ifufe na-esite na mmetụta foehn a na-akpọ ya Ifufe Zonda. Nke a Zonda Ifufe dịkwa kpọrọ nkụ na uzuzu uzuzu. Ọ na-abịa site na South Pole na mgbe ọ gafesịrị Oke Osimiri Pasifik, ọ na-ekpo ọkụ mgbe ọ rịgoro ugwu ugwu karịa 6km dị elu karịa ọkwa mmiri. Mgbe ị na-agafe ebe ndị a, ifufe nke Zonda nwere oke ọsọ ọsọ nke 80 km / h.
A na-emepụta ifufe Zonda site na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Polar Fronts, wee kpoo ọkụ site na ọdịda ala n'akụkụ ndagwurugwu. Ọ bụ otu usoro ahụ maka snow na-ada na ebe dị elu, nke a na-akpọ ifufe na-acha ọcha, nke na-agba ọsọ ruo 200 km / h. Ifufe a dị mkpa maka mpaghara a kpọrọ nkụ, ma jikọtara ya na nchịkọta nke snow na glaciers. Mmetụta na-akwụsị mgbe igwe ikuku oyi na-abanye na northwest na naanị na-ewere ọnọdụ n'etiti Mee na Nọvemba.
Foehn mmetụta na Spain
Na Spain ụfọdụ isi ifufe mara. Dị ka ihe atụ, ábrego bụ ikuku na-esi n’ebe ndịda ọdịda anyanwụ abịa. Ọ bụ ifufe dị nwayọọ ma dịkwa ntakịrị iru mmiri. A maara ya nke ọma na Plateau na Andalusia, ebe ọ bụ na ọ bụ onye na-eweta mmiri ozuzo, isi ọwụwa, oyi na ọnọdụ ndagide. Ọ bụ ifufe nke oge mgbụsị akwụkwọ na oké ifufe mmiri bụ ihe ndabere nke ọrụ ugbo mmiri ozuzo, ebe ha bụ isi mmiri ya. O sitere na Atlantic, site na mpaghara n'etiti Canary Islands na Azores.
Ihe ozo n’adighi nma nke abrego na eweta bu na, nihi oke iru mmiri ya, o na agbasa oku. Effectdị ifufe a ka ọnọdụ oyi n’arụ. N'elu ụsọ mmiri Cantabrian, Ábrego na-enweta aha ndị dị ka Viento Sur, Castellano (nke si na Castilla pụta, ya mere site na ndịda), Campurriano (nke si na mpaghara Cantabrian nke Campoo) ma ọ bụ "Aire de Arriba" (site na La Montaña; akụkụ kachasị elu nke si n'ógbè). Ọ bụrụ na ọ fụọ ọkụ nke ukwuu, ha na-akpọ ya "ndo", ebe "abrilada" ga-abụ oge ọtụtụ ụbọchị n'okpuru ọchịchị ikuku ahụ.
Na ọdịda anyanwụ Asturias, a na-akpọ Ábrego ikuku chestnut, ebe ọ bụ na mgbe ọ na-afụ ike n'oge mgbụsị akwụkwọ ọ na-eme ka mkpụrụ osisi ndị a daa.
Ihe ojoo na oru ugbo
Anyị ahụla na mmetụta foehn nwere ike ibute ọdịiche dị na okpomọkụ nke ruru ogo 25 na oge oyi. Ọ bụ ezie na mmetụta a kachasị dị na mpaghara, omume ya na ugbo nke mpaghara dị oke elu. N'ebe enwere mmetụta foehn karịa, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ikuku na-ebelata na iru mmiri na ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye, arụ ọrụ ugbo na mpaghara a amanye ịkọ mmiri ozuzo, ebe ọ bụ na ịgba ala mmiri ga-abawanye mmepụta ihe ma mebie mmiri mmiri.
Ọ bụrụ na anyị eleba anya na ugbo Argentine n'ụzọ zuru oke, anyị ga-achọpụta na akụkụ buru ibu mepụtara dị ka ọrụ mmiri ozuzo, nke a na-emepụta ngwaahịa ndị nwere obere mmiri chọrọ. Gha ọka wheat, soybean na anụ ụlọ bụ ihe atụ nke ọrụ kacha mma nke Argentina.
Na Chile, n'akụkụ nke ya, anyị na-ahụ ọnọdụ dị elu nke ukwuu karị maka ọrụ ugbo a na-agba mmiri. Nke a bụ n'ihi ọdịiche dị na nsogbu nke mmetụta foehn na mpaghara dị iche iche.
Maraworị ihe ọzọ dị iche iche nke ihu igwe na ịrụ ọrụ ya n'ụzọ zuru ezu yana nsonaazụ ya. Ihe omume nke, ọ bụ ezie na ọ nwere mmetụta mpaghara, amaara ụwa dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ mmetụta ọjọọ ahụ?
Germán, ụbọchị abụọ:
Aha m bụ Pepe Criado na ihe karịrị afọ 15, Iberia chụpụrụ m na US dị ka Onye isi Ala nke Ọrụ, maka America niile (South, Central, North and Caribbean).
N’ebe ahụ ka m nwere ike ịme ihe ọmụmụ afọ atọ na NOAA, nke nwere ike ịdị ka ihe dịka “Assistant Meteorology Applied to Aviation” (karịa ma ọ bụ obere).
Ugbu a, mgbe nkwarụ nke ọrịa kansa kpatara kemgbe 2001 (adịla m afọ 68), alaghachiri m Malaga, ebe m si, na-ebi ugbu a na Torremolinos.
Maka otu mkpakọrịta ọdịbendị flamenco na-enweghị uru na-ebipụta akwụkwọ kwa afọ. M na-ede edemede banyere ikuku na ikuku dị na Malaga, ọkachasị ala na, ebe ọ bụ na mmetụta dị njọ dị na ikuku Malaga a, ewezuga gụnyere eserese m weere dị mkpa, m ga-achọ ịma ma ị nwere ike ibipụta foto nke ndị ị nwere, ebe a kpọtụrụ aha na Foehn nke a gosipụtara nke ọma na m ga-anwa anwa ịsị na ị ga-ekwubiga okwu ókè.
O doro anya na m ga-ede akwụkwọ ahụ na nkọwa ị gosipụtara na o doro anya na, mgbe m kwadebechara ya na tupu ibipụta ya, m ga-ezitere gị isiokwu zuru ezu site na e-mail na mgbe edeziri ya, akwụkwọ di na nwunye site na mail.
Amaghị m ma ọ ga-adị ka ihe kwesịrị ekwesị.
Daalụ na mmakọ,
Zaghachi José Criado García
Foto ọ tinyere "mmetụta Foehn na Alps" esighi na mpaghara ahụ, ọ bụ nke Canary Island nke La Palma.
Jupita na Oke ifufe ya! Juno na-ewetara anyị izu a, ihe oyiyi kachasị mma na vidiyo ruo ụbọchị!
Searị elu oke osimiri tinyere London na Los Angeles n’ihe egwu